Mucaaradka oo loo ogolaaday in ay mudaharaadka ku qabsadaan daljirka dahsoon – WARSOOR
Mucaaradka oo loo ogolaaday in ay mudaharaadka ku qabsadaan daljirka dahsoon
MUQDISHO – (WARSOOR) – Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa u ogolaatay mucaaradka codsigoodii ahaa in ay mudaharaadka ku qabsadaan fagaaraha Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu yiri “Xukuumadda Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya iyada oo tixgelinaysa geeddi socodka dimuqraadiyada, qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaradka waxa ay u ogolaatay mucaaradka codsigoodii ahaa in mudaharaadka ay ku qabsadaan fagaaraha Daljirka Dahsoon”.
Xukuumadda Federaalka ayaa sheegtay in ay markii hore mucaaradka u soo jeedisay in ay mudaharaadka ku qabsadaan garoonka Eng. Yariisow si loo xaqiijiyo habraacyada xakamaynta COVID-19, laakiin markii mucaaradku ku adkaysteen fagaaraha Daljirka Dahsoon xukuumaddu ogolaatay dalabka mucaaradka.
Mudaharaadka Muqdisho oo ah mid looga soo horjeedo Madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheysan maalinta sabtida ee horraanta todobaadka dambe.
Af-Hayeenkii Madaxtooyada Somaliland Oo Shaaca Ka Qaaday Inuu Baneeyay Xilkii Af-Hayeenimo